The Giving Circle | Giftsofhope
Kusoo dhawow wareegga wax bixinta
Ka mid noqo Wareegtada Bixinta, koox ka mid ah deeq-bixiyeyaasha jacaylka leh ee go'aansaday inay isbeddel ku sameeyaan bulshadeena iyada oo loo marayo tabarucaadka billaha ah. Waxqabadka urur waa natiijada dadaallada isku dhafan ee shaqsi kasta oo gudaha ka tirsan. Nofeembar 15th, 2020, waxaan u dabaaldegeynaa sannad-guuradeenna 4-aad - waxaan ku guuleysannay wax ka sarreeya oo ka sarreeya wixii aan markii hore u maleynay –waxaanuna u dabaaldegeynaa waayihii hore oo aan dhiirrigelinaynaa mustaqbalkeenna si wadajir ah beel ahaan. Si aasaaskayagu u taagnaado mid adag, waa inaan sii wadno isu imaatinka si tan u dhacdo.
Muxuu Taageeradu U egyahay
La Siiyey Bil Walba
In la joogteeyo
Markaad sameyso tabarucaad bille ah, waxaad ku biireysaa koox shaqsiyadeed sida naftaada oo kale ah oo daneynaya inay wax ka beddelaan nolosha qof kale. Taageeradaada billaha ah waxay kaa caawin doontaa inaad siiso cunto, dhar iyo waxyaabo kaloo badan oo loogu talagalay shaqsiyaadka ku nool Gobolka Washington oo dhan.
“Geesi inaad gacantaada u fidiso mugdiga, inaad gacan kale u soo jiidatid iftiinka.”
Ka mid noqo Wareegga Wax Bixinta
Iyada oo deeqaha billaha ah ee soo noqnoqda, waxaan sii wadi karnaa soo qaadista deeqaha tafaariiqda sidoo kale waxaan siineynaa cunno waxaanna u fidin karnaa aqoon-isweydaarsiyo xiiso leh oo loogu talagalay carruurta ku jirta hoyga iyo guryaha dakhligoodu hooseeyo